Daacish oo la sheegay inay dad ka qoranayaan gudaha dalka Kenya. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Daacish oo la sheegay inay dad ka qoranayaan gudaha dalka Kenya.
Guddoomiyaha Degmadda Mandera, Fredrick Shisia ayaa hadalkaasi ku sheegay Munaasabadda Maalinta Xorriyadda Dalka Kenya, oo ku beegnayd maalintii Sabtida ee la soo dhaafay.
Waxa uu sheegay inay Kooxda Daacish ee ka go’day Xarakadda Alshabaab ay bilaabeen inay gudaha dalka Kenya ka qortaan Dhallinyarro ka mid noqda Daacishta Somalia.
Hadalkiisa ayaa soo baxay dhowr maalmood kadib, markii uu Wargeyska The Star ee ka soo baxa Nairobi qoray inuu Hoggaamiye ka tirsanaa Xarakadda Alshabaab, laguna tuhumayo inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkii lagu qaaday Jaamacadda Garissa uu ka goostay Alshabaab.
Taliyihii hore ee Dagaalamayaasha Alshabaab ee Gobalka J/hoose, Maxamed Kuno laguna naanayso Gacma-dheere uu dabayaaqadii bishii hore ee November ku biiray Kooxda Dowladda Islaamka ee Daacish ee ka dagaalanta dalalka Iraq iyo Syria.
Sirdoonka ka hawlgala Kenya waxay ka digeen inuu Maxamed Kuno “Gacma-dheere” qaadan doono Kaalinta Hoggaaminta Daacish ee gudaha dalka Kenya.
Dhinaca kale, Dowladda Kenya waxay horey lacag dhan 215,000 oo Dollar u dul-dhigtay soo-qabashadda Gacma-dheere, waxayna Ciiddanka Kenya dhowr jeer u sheegeen inay dileen Sarkaalkaasi.
Haweeney Muslimad ah oo loo magacaabay inay Garsoore ka noqoto Maxkamadda New York.